२६ औँ साधारण सभालाई लिएर चारतारे युवा क्लब (CYC Nepal) भित्र चर्कियो बिबाद ! – ebaglung.com
२६ औँ साधारण सभालाई लिएर चारतारे युवा क्लब (CYC Nepal) भित्र चर्कियो बिबाद !
२०७५ कार्तिक १८, आईतवार २०:१८	Top News, अन्य समाचार, थप समाचार
बागलुङ २०७५ कात्तिक १८ । बागलुङ जिल्लामा चारतारे युवा क्लब (सीवाईसी नेपाल) पुरानो र स्थापित सामाजिक संस्था मानिन्छ । २७ वर्ष पहिले स्थापना भएको चारतारे युवा क्लबले सन्चालन गरेको लघुवित्त कार्यक्रमको कारोबार बार्षिक अर्ब बराबर छ । आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ यसको कारोबार रु ९४ करोड ४४ लाख, ४३ हजार ५ सय ३२ रहेका विवरणले देखाउछ ।
यस्को सन्जाल (शाखाहरु) बागलुङ जिल्लामा मात्र सीमित नभएर तम्घास, बेशि शहर, सुन्दर बजार, शान्तिपुर, तानसेन, दमौली, खैरेनीटार, रामपुर, भोर्लेटार, वामी र पुर्तिघाट गरि १९ शाखाहरुमा फैलिएको छ । अर्थात सीवाईसीको कार्यक्षेत्र विशाल छ । खुशीको कुरा केहि समय पश्चात चारतारे युवा क्लब लघुवित्त बैँक बन्दैछ ।
यस संस्थाका ५ सय जना भन्दा बढी विशिष्ट सदस्यहरु छन् भने साधारण सदस्यहरु समेतगरी सदस्यहरुको संख्या ३ हजार बढी रहेको श्रोत बताउछ ।
पछिल्लो समय चारतारे युवा क्लब (सीवाईसी नेपाल)ले स्थानीय पत्रिकामा २७ औँ साधारण सभा सम्वन्धी सूचना प्रकाशित गरेपछी बिबादमा तानिएको छ । यस क्लबका विशिष्ट एवं साधारण सदस्यहरुले २६ औँ साधारण सभा नगरिकनै २७ औँ साधारण सभा कसरी हुन्छ ? भनेर गम्भीर प्रश्न खडा गरेका छन् । उता संस्थाले २६ औँ साधारण सभा गरेको भन्दै संस्थाको मुखपत्र ग्रामिण कन्दरा नामक बुलेटिन प्रकाशित गरेर काउन्टर दिन खोजेको बताईएको छ ।
यस बुलेटिन (पुस्तिका) लाई झुटको पुलिन्दा भन्दै सदस्यहरुले २६ औँ साधारणसभा हुँदै नभएको भनि प्रश्न उठाएपछी बिबाद छताछुल्ल बनेको हो । कहिले कुन समयमा कुन स्थानका २६ औँ साधारण सभा सम्पन्न भयो ? भन्ने प्रश्न गर्दै सीमित व्यक्तिहरुको चाँजो पाँजोमा पुस्तिका तयार गरी छपाई गरेको भन्दै संस्थालाई परिवार र निकटस्थ व्यक्तिहरुको कव्जामा राख्ने दुष्प्रयास भएको आरोप सदस्यहरुको छ ।
संस्थाका सदस्यहरुलाई नै थाहा नभएको २६ औ साधारण सभा कसरी भयो ? को थियो प्रमुख अतिथी ?, कस्ले ग-यो उद्घाटन ? भन्ने सदस्यहरुको प्रश्न छ । हतार हतारमा पुस्तिका प्रकाशित गरेर त्यसैलाई प्रमाणको रुपमा प्रस्तुत गर्दै २६ औँ साधारण सभा सम्पन्न भएको भन्न खोज्नु दिनलाई रात पार्नु हो, एक सदस्यले ईबागलुङलाई भने, समयमै साधारण सभा भएको थियो भने यो पुस्तिका अहिले सम्म सदस्यहरुलाई किन वितरण गरिएन ? पुस्तिकामा प्रेसको नाम उल्लेख नहुनु षडयन्त्रपूर्ण छ । पुस्तिकाको छपाईलाई लिएर छानविन गर्नु पर्ने माग सदस्यहरुले उठाएका छन् ।
संस्थाकै सदस्यहरुबाट यस प्रकारका प्रश्नहरु बाहिर आई सकेपछी चारतारे युवा क्लब (सीवाईसी नेपाल)ले स्वयं अग्रशर बनेर सदस्यहरुको मागप्रति गम्भीर बनेर सहयोग गर्नु जरुरी छ । कुन प्रेसमा मुद्रण गरेका हो ? त्यो भन्दिनु प-यो । कुन मितिमा मुद्रण गरेको हो सदस्यहरुलाई विश्वास हुने गरी संस्थाबाटै छानविनमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गरिनु पर्छ ।
कुन प्रेसमा मुद्रण गरेको हो त्यस्को जानकारी दिएर कहिले कुन मितिमा छापिएको भन्ने बारे छानबिनमा सहयोग गरी किन सदस्यहरुलाई अहिले सम्म पुस्तिका वितरण गरिएन भन्ने सन्दर्ममा चित्तो बुझ्दो जबाफ दिएर संस्था प्रतिको विश्वसनीयतालाई कायम गर्नु संस्थाको कार्यसमिति सल्लाहकारहरुको अहम् कर्तव्य हुन आउँछ । बिबाद बढ्नु संस्थाको हितमा छैन भन्ने सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो ।
शहरी विकास तथा भवनको नयाँ कार्यालयको प्रजिअ खरेलद्वारा उदघाटन !
स्वास्थ्य चौकीमा पुराई नसक्दै कान्छी सन्तानको जन्म स्ट्रेचरमा